Mashandisiro ekushandisa HomeKit zviitiko neiyo HomePod | IPhone nhau
Mashandisiro ekushandisa HomeKit zviitiko nePambaPod
Iyo HomePod inoonekwa muImba app, kungofanana neApple TV, asi zvakadaro Hatigone kuishandisa kuisanganisira mune chero chiitiko, kana kuita chero chiitiko chinokonzereswa neinofamba sensor. Tsitsi nekuti mikana yacho ingave yakawanda, asi kumirira Apple kuti itipe mhinduro yepamutemo, iyo ichauya nekukurumidza kwete kupfuura gare gare, isu tine zvishandiso zvekuzviita nenzira yedu.
Uye ndizvo izvozvo Iyo Shortcuts app Apple yakaburitswa neIOS 12 ine mikana yakakura, uye isu tinogona kuishandisa kuitira kuti chiitiko cheKeKeKit chinosanganisira kutamba kweimwe mimhanzi runyorwa pane yedu HomePod. Isu tinotsanangura nzira yekuzviita nhanho nhanho kuti tikwanise kunakidzwa neimba yedu otomatiki uye neyedu mimhanzi yatinofarira panguva imwe chete.
Chinhu chekutanga chatichaita kusarudza runyorwa rwatinoda kubereka pamwe nechaitika chatichabatana. Parizvino sarudzo iyi haibvumirwe maalbum kana maartist, zvinyorwa chete, asi zvirinani Hongu, tinogona kusarudza iyo yatakasika kana yeApple.
Isu tinovhura iyo Shortcuts application uye tinya pa "+" mukona yekumusoro kurudyi kana pa "Gadzira nzira pfupi" pasi pechiso.
Dzvanya pabhokisi rekutsvaga uye nyora «Playlist»
Isu tinosarudza sarudzo «Get Playlist»
Paunenge wawedzerwa, tinya kurudyi, pane «Sarudza»
Isu tinosarudza rondedzero yatinoda kutamba nguva dzese dzatinotanga chiitiko ichocho.
Zvino ngatiitei chii apo isu patinoita chiitiko icho chinyorwa icho chinobudiswazve yatakasarudza.
Pachiratidziro chikuru cheiyo nzira pfupi, mubhokisi rekutsvaga tinonyora «Mumhanzi» uye sarudza sarudzo «Ridza mimhanzi»
Kurudyi rwechiito chatichangobva kuwedzera tinosarudza sarudzo «Nziyo» uye «Zvese»
Zvekare, mubhokisi rekutsvaga, tinonyora "Kumba" uye sarudza sarudzo "Mhanya Kumusoro Scenery". Izvo zvakakosha kuti chiitiko chakatogadzirwa muImba app kuti iwe umhanye.
Iye zvino tinosarudza Imba ipi (kana tine akati wandei »uye chiitiko chipi chatiri kuda kutamba.
Dzvanya pane bhatani riri kumusoro kurudyi, pazasi pe "Waitwa" kugadzirisa iyo yekupedzisira ruzivo, senge zita rezvidimbu kana icon.
Dzvanya pa «Wedzera kuSiri»
Pakupedzisira zvatakasiya ndeizvi gadzira rairo yekutaura neyatichaita chiitiko ichocho uye chiito ichocho chekutamba mimhanzi yedu runyorwa paPodPod.
Dzvanya pane bhatani dzvuku
Isu tinoti iwo murairo watinoda kuti nzira pfupi iite (mumuenzaniso "Ndiri kumba")
Pese patinoti "Hei Siri, ndasvika kumba" iyo HomeKit yatinosarudza inomhanya uye mumhanzi watinosarudza ucharidza.
Inotamba sei paPambaPod? Zviri nyore kwazvo, iyi nzira pfupi inotamba mimhanzi pane chishandiso patinopa kuraira. Kana ndikamhanya iyo yekudimbudzira pane iyo iPhone, mimhanzi ichatamba pane iyo iPhone. Kana ndikapa rairo pane iyo HomePod, inozotamba pane Apple mutauri. Sezvo mapfupi akawiriraniswa kuburikidza neICloud, zvawakagadzira nzira pfupi pa iPhone yedu, ichave iri paPambaPod, unongofanira kuita bvunzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mashandisiro ekushandisa HomeKit zviitiko nePambaPod
Mhoroi, rinonakidza kwazvo bhuku kunyangwe ndikanonoka kusvika, ndinovimba mumwe munhu anogona kupindura mibvunzo mishoma yandinayo.
1) Ndatenga HomePod uye kana ndikakubvunza, Hei Siri, ndeapi nhau atinawo nhasi? Siri akapindura kuti iyo nhau podcast haiwanike munyika mangu (Spain). Izvi hazviwanzoitika kubvira kare kana ndikaridza nhau dzeCadena Ser, RTVE nezvimwe ... Is it because I have updated the Beta of iOS 14 on the iPhone?
2) Ndingawana sei kana ndikati kuna Siri, Hei Siri, mangwanani akanaka? Anopindura nekutaura mangwanani, achindiudza mamiriro ekunze uye nekundibudisira nhau? Ndiri kuedza uye ini handizive kuti ndozviita sei, neidzo pfupi? Kana mumwe munhu achigona kundibatsira ndapota, Ndatenda!
Pokémon GO mutambi kurwa kuri kuuya munguva pfupi
Apple inotangisa shambadziro nyowani yeiyo 'Shot pa iPhone' mushandirapamwe neakakurumbira maJapan Decotoras